🥇 ▷ Apple Watch Studio: sidan ayaa ah sida saacaddaada cusub looga doorto ku dhawaad ​​1,000 isku-darka ✅
Apple Watch Studio: sidan ayaa ah sida saacaddaada cusub looga doorto ku dhawaad ​​1,000 isku-darka
Intii lagu jiray soo bandhigida taxanaha cusub ee Apple Watch Series 5, shirkaddu waxay shaaciyeen hab cusub oo lagu helo saacadda tufaaxa. Waxay ku saabsan tahay Apple Watch Studio, waayo-aragnimo dukaameysan oo shaqsiyadeed oo dheeraad ah halkaas oo adeegsadayaashu ay ka iibsan karaan nooca Apple Watch oo ay weheliso suunka ay rabaan. Iyagu waxay ku sameyn karaan labadaba khadka tooska ah iyo kan tooska ah ee loo maro barnaamijka iyo dukaannada jirka ee Apple.
Qiyaastii kun oo isku darka taxanaha Apple Watch 5
Deirdre O’Brien, oo loo magacaabay masuulka Apple Retail iyo dadka ka dib bixitaankii Angela Ahrendts, ayaa mas’uul ka ahaa fulinta baahinta nidaamkan cusub. Waagii hore, qofku wuxuu aadi lahaa Apple Store labadaba muuqaal ahaan iyo qaab ahaanba waana inuu doortaa Apple Watch iskudarka wadajirka ah iibin. Markay rabto suunka ka duwan kuwa “lammaanaha”, waa inuu gooni u iibsado.
Taasi waa, haddii aad timaadid dukaan Apple miyaad dooneysay inaad ku iibsato birta Apple Watch oo leh xargaha casaanka cas (oo loo maleynayo inay tahay isku darka aan jirin), waa inaad marka hore iibsataa saacadda birta leh suunka cad iyo ka dibna iibso kan guduudka ah. Sida muuqata, kuma habboona adeegsiga.
Waqtigaan la joogo, Apple Watch Studio wuxuu ku xaddidan yahay taxanaha 5 iyo wadamo kooban
Waxay ahayd hab si wanaagsan loogu maareeyo logistics iyo kaydinta Apple Watch, labadaba kaydinta iyo hawlgallada internetka. Moodooyinka hore loo sii qorsheeyay, boos ka yar ayaa loo baahan yahay. Iyada oo la adeegsanayo Apple Studio, xaaladdu way is beddeli doontaa maadaama dukaamada jir ahaaneed iyo wax u dhigmahooda internetka ay qasab tahay inay u diyaar garoobaan inay la kulmaan ku dhawaad ​​kun kun oo iskudarka Apple Watch ee jira.
Isbadalkan waxaan ku tagi karnaa Dukaan Apple ah, ku muuji moodalka iyo xargaha aan rabno, bixinno oo si sax ah uga baxno aaladda aan ku fikirnay. Iyadoo aan loo eegin iskudarkayaga inay caan ahayd iyo in kale. Dabcan, waqtigan xaadirka ah waxaa kaliya loo heli karaa Apple Watch Series 5
Sidee bay u shaqaysaa Apple Watch Studio
Apple weli ma aysan soo saarin taariikhda loo bilaabayo Apple Watch Studio dukaamadaada jirka. In kasta oo ay tilmaamtay in aanu wada gaadhsiin doonin dhammaan waddammada isku wakhti isku mid ah (xitaa annagu garan mayno waddamada ka qaybgalaya). Waan fahamsanahay taas bilowga way xadidi doontaa isla markaana sida ay u shaqeyso la arki doono, waxay kusii fidi doontaa wadamo badan iyo bakhaaro.
Haa waxaan ka eegi karnaa qaabka tooska ah ee Apple Watch Studio qeybtaas. Sidookale wuu shaqeeyaa laga bilaabo barnaamijka Apple Store ka macruufka.
Labada midkoodba, hawlgalku aad ayuu u lammaan yahay. Waa inaan doorannaa dhexeeya waxyaabaha soo socda:
Cabbirka sanduuqa: 40 ama 44mm.
Dacwada: aluminium, bir, bir ama sheerar.
Xarig: isboorti, loop isboorti, maqaar iyo bir aan la karin.
Mar haddii qaabkayaga aan door bidno la doorto, waxaan riixaynaa badhanka Done iyo menu of baadhid ka socota dukaanka aan ugu dambeyntii dooran doono Wi-Fi ama mobiilka mobilada. Halkaas ayaan ku bixin karnaa oo waxaan ku dhejin karnaa faahfaahinta dhoofinta iyo qaansheegashada si loo dhammeeyo hawsha oo dhan.
Nidaamku aad ayuu u fududahay in la isticmaalo oo si sahal ah ayuu kuu muujinayaa sidee saacadaadu u ekaan doontaa. Kaas oo kaa caawinaya inaad fikrad ka hesho sida ay u egtahay haddii aadan waligaa saacad Apple soo jeedin.
La wadaag Apple Watch Studio: sidan ayaa ah sida saacaddaada cusub looga soo xusho ku dhawaad ​​1,000 isku-darka